LEGO Super Mario အက်ပလီကေးရှင်းကို ၂၀၂၁ အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီ
16 / 12 / 2020 17 / 12 / 2020 ဂျက်ယက်စ် 1421 Views စာ0မှတ်ချက် 71380 သင်၏စွန့်စားမှုပြုလုပ်သူ Set ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ, 71381 Chain Chomp တောတွင်းကြုံတွေ့တိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်, 71382 Piranha Plant Puzzling Challenge တိုးချဲ့ခြင်းသတ်မှတ်ခြင်း, 71383 Wiggler ၏အဆိပ် Swamp တိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်, 71384 Penguini Mario ပါဝါ Up-Pack ကို, 71385 Tanooki Mario ပါဝါ Up-Pack ကို, 71386 အက္ခရာအထုပ် - စီးရီး 2, App ကို, Lego, Lego မာရီယို, Lego စူပါမာရီယို, မာရီယို, စူပါမာရီယို
Lego ပရိသတ်တွေကအသစ်တစ်ခုကိုစောစောစီးစီးကြည့်နိုင်ပါတယ် Lego စူပါမာရီယို 2021 ကို app အသစ်ရှေ့ဆက်အကွာအဝေး၏ update ကိုအဖြစ်သတ်မှတ်။
အဆိုပါ Lego စူပါမာရီယို အက်ပလီကေးရှင်းသည်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကပထမဆုံးသောလှိုင်းထုတ်ခြင်းမတိုင်မီစတင်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုတာကအစောပိုင်းတွေ့ရှိချက်တွေကိုရှာဖို့ကံကောင်းတဲ့ပရိသတ်တွေကညွှန်ကြားချက်တွေကိုရယူပြီးသူတို့ရဲ့စုဆောင်းမှုတွေမှာထည့်သွင်းဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစရာမလိုတော့ဘူး။ ယခုအက်ပလီကေးရှင်းကို ၂၀၂၁ အကွာအဝေးအတွက်အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ဒီအသစ်သော update ကိုကံကောင်းပရိသတ်တွေ st မှခွင့်ပြုမသာart အစုံစီးရီးအသစ်များကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ သို့သော်အက်ပလီကေးရှင်းအသုံးပြုသူများသည်ညွှန်ကြားချက်များမှတဆင့်အကွာအဝေးကိုပထမဆုံးကြည့်နိုင်သည်။
အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်အတွက်ရရှိနိုင်သတ်မှတ်ချက်အားလုံးပါဝင်သည် Lego စူပါမာရီယို သုံးအပါအဝင်ယခုအချိန်အထိ 2021 ဘို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအစုံ တိုးချဲ့မှုအစုံနှစ်ခု ပါဝါ -up, အထုပ်နှင့် 71380 သင်၏စွန့်စားမှုပြုလုပ်သူ Set ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ။ ဒါ့အပြင်ရရှိနိုင်သစ်ကိုဖြစ်ပါတယ် 71386 အက္ခရာအထုပ် - စီးရီး 2တွေ့ပြီနှင့် YouTuber မှပြန်လည်သုံးသပ်သည်.
အသစ်ကအကွာအဝေးနှင့်အတူထည့်သွင်းခဲ့သည် Lego စူပါမာရီယို app, ပရိတ်သတ်တွေနဲ့အတူနှစ်သစ်ကူးစတင်နိုင်ပါသည် Lego စူပါမာရီယို, 2021 ဇန်နဝါရီလအစုံသစ်ကိုအကွာအဝေးဖြန့်ချိအဖြစ်။
၏လုပျငနျးကိုထောကျပံ့ဖို့ Brick Fanaticsကျေးဇူးပြု၍ ဝယ်ပါ Lego ကနေအစုံ LEGO.com ငါတို့သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
Copy ကူး Link ကို
← Drake the rapper သည်သူ၏အိမ်ကြီး၏ LEGO ပုံတူကိုဖော်ပြခဲ့သည်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Lone Wolf →
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တောင်းဆိုနေတဲ့လယ်ယာမှတ်သားထားတဲ့ *
မူပိုင်ခွင့်© 2022 Brick Fanatics.All rights reserved.
Facebook က Messenger ကို
စွမ်းအားဖြင့် လူမှု Snap